Rea Madrid oo Ronaldo u adeeg-saneysa soo xera-galinta Neymar | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Rea Madrid oo Ronaldo u adeeg-saneysa soo xera-galinta Neymar
Posted by: radio himilo January 14, 2018
Muqdisho – Real Madrid ayaa laga yaabaa inay isticmaasho Cristiano Ronaldo iyagoo qeyb kaga dhigeya heshiiskii ay ku doonayaan xiddiga PSG ee Neymar, sida ay ku warameyso El Closet radio ee Cadena SER.
Florentino Perez ayaa doonaya inuu xiddiga reer Brazil ku soo daro kooxdiisa, waxaana uu diyaar u yahay in xiddigan uu qeyb ka noqdo weerar-yahanada kooxda ka dhisan caasimadda dalka Spain sanadka soo aadan.
Wararka ayaa intaas waxey ku darayaan in laacibka hadda hogaamiyeya Real ee Ronaldo qudhiisu uu diyaar u yahay in uu ka tago naadig isla markaana uu u diga roto koox kale oo Yurub ah.
Neymar ayaa Barcelona kaga tagay heshiiskii ugu qaalisanaa taariikhda kubadda cagta oo ah 222 milyan oo lacagta Yurub ah, waxaana la fahansanyahay haddii ay Real soo xera galineyso laacibkan lacagtaas mid ka badan in ay kaga bixi doonto.
Previous: Kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo isku heysta Xiddig Muhiim ah
Next: Sameey sidaan si aad dhakhso u seexato